सेनाले गरेको कारबाहीमा तालिबान जिल्ला गभर्नरसहित छको मृत्यु - Enepalese.com
सेनाले गरेको कारबाहीमा तालिबान जिल्ला गभर्नरसहित छको मृत्यु
इनेप्लिज २०७५ वैशाख २६ गते २१:४५ मा प्रकाशित
An Afghan security personnel retaliates against Taliban insurgents during an anti-Taliban operation in Dur Baba district near the Pakistan-Afghanistan border in the eastern Nangarhar province on September 25, 2014. At least 73 militants were killed and several others wounded during ongoing clashes between Afghan security forces and the Taliban militants, Nangarhar provincial police commander Fazal Ahmad Shirzad said. AFP PHOTO/ Noorullah SHIRZADA
अफगानिस्तान, २६ वैशाख । अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त फर्‍याबमा आतङ्ककारीविरुद्व गरिएको कारबाहीको क्रममा तालिवान जिल्ला गर्भनरसहित कम्तीमा ६ जना मारिएका छन् ।
कारबाहीका क्रममा तालिबानका जिल्ला गभर्नर मुल्ललाह हिज्बुल्लाहसहित ६ जना मारिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रान्तीय राजधानी मैमानाबाट दक्षिणतर्फ रहेको स्थानमा भएको कारबाहीका क्रममा सुरक्षाबलतर्फ पनि घाइते भएका जनाइएको छ । अफगान सरकारसँग युद्ध गर्दै आएका तालिबान समूहले भने यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । –रासस/सिन्ह्वा